Mety ve ny Herisetra? - Fihetseham-po iray manan-danja
Mety ve ny Herisetra?
Ny herisetra dia hevi-dehibe ho an'ny famaritana ny fifandraisana ara-tsosialy eo amin'ny olombelona, ​​hevitra iray misy ifandraisany amin'ny heviny ara-moraly sy ara-politika . Ao amin'ny sasany, angamba ny ankamaroan'ny toe-javatra dia miharihary fa tsy ara-drariny ny herisetra; Fa, ny tranga sasany dia toa sahiran-tsaina kokoa amin'ny mason'ny olona iray: mety hanamarina ve ny herisetra?
Herisetra toy ny fiarovan-tena
Ny fanamarinana ara-drariny indrindra amin'ny herisetra indrindra dia rehefa vita izy io ho setrin'ny herisetra hafa.
Raha misy olona manaparitaka anao amin'ny tarehy ary toa misy fikasana hanohy hanao izany, dia toa toa rariny izany ka manandrana sy mamaly ny herisetra ara-batana.
Zava-dehibe ny manamarika fa ny herisetra dia mety ho tonga amin'ny endrika samihafa, ao anatin'izany ny herisetra ara-tsaina sy herisetra amin'ny teny verbal . Amin'ny endrika malefaka indrindra, ny soso-kevitra manohana ny herisetra amin'ny fiarovan-tena dia milaza fa ny herisetra amin'ny karazany, ny valinteny mitovy amin'ny herisetra dia azo hamarinina. Noho izany, ohatra, amin'ny famaranana dia mety ho ara-drariny ny mamaly amin'ny punch; Na izany aza, ny hamelezana (endrika endrika herisetra ara-tsaina sy ara-pihetseham-po, ary ny rafitra), tsy voamarina ianao amin'ny famaliana valifaty (endrika herisetra ara-batana).
Amin'ny dikan-teny maoderina kokoa amin'ny fanamarinana ny herisetra amin'ny anaran'ny fiarovan-tena, ny herisetra amin'ny karazana rehetra dia azo hamarinina amin'ny valinteny amin'ny herisetra amin'ny karazana hafa rehetra, raha misy ny fampiasana tsara ny herisetra ampiasaina amin'ny fiarovan-tena .
Noho izany, mety mety tsara mihitsy aza ny hamaly ny fanararaotana amin'ny fampiasana herisetra ara-batana, raha toa ny herisetra dia tsy mihoatra noho izay mety ho karama mety, ampy hahazoana fiarovan-tena.
Vao mainka manaitra ny fanamarinana ny herisetra amin'ny anaran'ny fiarovan-tena ny fanoherana fa ny fahafahana irery ihany amin'ny herisetra amin'ny hoavy no hitranga aminao, dia manome antony ampy hampiasanao herisetra amin'ny mpanolana mety.
Raha mitranga imbetsaka amin'ny fiainana andavanandro ity tranga ity, dia azo antoka fa sarotra kokoa ny manamarina: ahoana no ahafantaranao fa hanaraka izany ny fandikan-dalàna?
Herisetra sy Ady tsotra
Ny zavatra vao noresahintsika momba ny haavon'ny olona dia azo atao ihany koa amin'ny fifandraisana eo amin'ny States. Ny Fanjakana iray dia azo hamarinina amin'ny fiatrehana herisetra amin'ny fanafihana mahery setra - ny herisetra ara-batana, ara-tsaina, na amin'ny teny mafana. Ankoatra izany, araka ny sasany, mety azo ekena ny hamaly ny herisetra ara-batana ho an'ny herisetra ara-dalàna na ara-panjakana. Eritrereto, ohatra, ity State S1 ity dia mametraka fepetra amin'ny fanjakana S2 hafa mba hahafahan'ny mponin'ity farany hisy fiantraikany goavambe, tsy fahampian'ny fitaovam-piadiana voalohany, ary ny fahakelezan'ny sivily. Na dia mety hisy hiady hevitra aza fa tsy nanome ny herisetra ara-batana momba an'i S2 ny S1, dia toa mety ho antony maromaro ny fihetsik'i S2 amin'ny S2.
Ny adihevitra momba ny fanamarinana ady dia noresahana betsaka tao amin'ny tantaran'ny filôzôfia tandrefana , ary ankoatra izany. Raha ny sasany dia nanohana imbetsaka ny fomba fijery pasifika, nanindry ny mpanoratra hafa fa amin'ny fotoana sasany dia tsy azo ihodivirana ny miady amin'ny mpanafika sasany.
Ny idealy ety amin'ny tena izy
Ny adihevitra momba ny fanamarinana ny herisetra dia tranga goavana iray amin'ny fametrahana izay heveriko fa manitikitika ny saina amin'ny toe-tsaina etsy sy eroa.
Ny idealista dia hanitrikitrika fa, na inona na inona, ny herisetra dia tsy azo hamarinina na oviana na oviana: ny olombelona dia tokony hiezaka amin'ny fitondran-tena tsara izay tsy ahitan'ny herisetra mihitsy, na izany toe-javatra izany dia azo tratrarina na tsia. Etsy ankilany, ny mpanoratra toa an'i Machiavelli dia namaly fa, raha ny marina, ny etikan'ny idealistic idealista dia mety tsara tokoa, amin'ny fampiharana izany etika izany dia tsy azo arahina; Mihevitra indray ny zava-misy eo amin'ny teboka, amin'ny fampiharana ny herisetra ny olona, ​​noho izany dia manandrana sy manana fitondrantena tsy misy herisetra dia tetikady iray izay natokana ny tsy hahomby.
Ahoana no fomba handresen-dahatra ny soso-kevitra iray tsy misy fanamarihana amin'ny counterexample
Filozofia tsara indrindra
Fihetsiketsehana manohitra ny relativisty
Inona no atao hoe politika?
Nanazava ny fitsaratsarana henjana
Teny filôzôfika momba ny herisetra
Teny filôzôfika momba ny lainga
Inona no atao hoe filôzôfia?
Teny filôzôfika momba ny Art
René Descartes '"Porofon'ny fisian'Andriamanitra"
Ny Adin'ny Iogoslavia teo aloha
Laurel Oak, hazo tsotra any Amerika Avaratra
19 Tsy maintsy mahita seho an-tsehatra amin'ny robo goavam-be
Inona no dikan'ny hoe midika hoe miditra amin'ny fifandraisana?
Top 10 Pop Songs of 1990
Miaraka amin'ny Lalàna Banky 'Check 21'
20 Methods de la présentation creative
Ireo hira kristiana ambony indrindra amin'ny Evanjely ho an'ny andron'ny Ray
Fanontaniana isan-kerinandro: Tools for the Classroom Secondary
Ny fifindran'ny telegrafy dia niova mandrakizay ny fifandraisana
Tendrombohitra Elbrus - tendrombohitra avo indrindra any Rosia
Afaka manadio ny fitaratra ny mpandoto
2018 Tour de France Tour
The Short House Marie - Ny ohatra nasehon'i Glenn Murcutt
Fahaiza-mamaritra ny fahavitrihan'ny mpiara-mianatra
Ahoana ny fifandraisanao amin'ny tontolon'ny "A" amin'ny art?
Ahoana ny fomba hanatonana Galerie Art amin'ny sary hosodoko
Salisbury University GPA, SAT sy ACT Data
Ny Baths sy Hygienes Romanina any Roma fahiny
Masoivohon'i Bird avy any Kanada
Nahoana no sahiran-tsaina kokoa ny matematika amin'ny mpianatra sasany
Sakafo ho an'ny Sabata Imbolc
Women's Golf Clubs: Inona no fantatra, Aiza no hividianana?
Ahoana no nametrahan'ny fitondrana mpanatanteraka 9981 ny miaramila amerikana?